Philips Toaster HD2648/20 ~ ICT.com.mm
HomePhilips Toaster HD2648/20
Philips toaster with independent double 2-slice operation and variable width slots. Toast up to4slices, thick or thin, evenly golden brown. Features cancel, defrost & reheat button, variable browning control and... [Learn more]
Brand: PHILIPSSKU: 71549N/ASee more: Benchtop Appliances, Lifestyle, New Arrivals, Philips, Products, ShopFilter by: Toaster
Philips အမှတ်တံဆိပ် ပေါင်မုန့်မီးကင်စက် ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်နှစ်ချပ်မှ လေးချပ်အထိ တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ အဆင်ပြေပြေ ကင်လို့ရပါတယ်။ အပူချိန်ညီညီမျှမျှနဲ့ ကင်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါင်မုန့်ချပ်တွေဟာ ထူသည်ဖြစ်စေ ပါးသည်ဖြစ်စေ အကျက်ညီမျှပြီး တပြေးတည်းအရောင်ပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Cancel ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေခဲဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ အပူပြန်ပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ခလုတ်တွေကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ရဲ့ အရောင်အနေအထားကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်ပြီး ကင်လို့ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ပေါင်မုန့်မီးကင်စက်ရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ထွက်နေတဲ့အပိုင်းကို အပူချိန်လုံးဝမရှိအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အပြင်ထုတ်လို့ရတဲ့ ဗန်းငယ်လေးတွေကြောင့် ပေါင်မုန့်အစအနတွေကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းဖို့ အဆင်ပြေပြီး ပုရွက်ဆိတ်တွေရဲ့ ရန်ကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ အသုံးပြုသူရဲ့ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး အကောင်းဆုံးထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Philips ပေါင်မုန့်မီးကင်စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာမခံသက်တမ်း နှစ်နှစ်အထိ ပေးထားပါတယ်။
Independent double 2-slice operation to toast2slices independently or four at the same time for optimal flexibility and convenience.
Total price:K255,000 K238,200
This item: Philips Toaster HD2648/20 K159,000